Frank Lampard ayaa u sheegaya ciyaartoyda
Frank Lampard ayaa siiyay digniinta ugu dambeysa ciyaartoyda Chelsea wuxuuna u sheegay inay jiraan labo wado oo kaliya oo garab istaagi kara kana bad baadin kara eryida ama caksi, laakiin ma jiro meel dhexe.
Tababare Lampard ayaa doonaya in ciyaartoydiisa ay muujiyaan adkeysi waqtigaan adag, si ay u guuleystaan.
Chelsea ayaa wajihi doonta Morecambe heerka afaraad caawa waxayna u gudubtay wareega afaraad ee FA Cup.
Chelsea ayaa badisay kaliya hal kulan lixdii kulan ee ugu danbeysay, waxaana laga badiyay afar ka mid ah.
Tababare Frank Lampard ayaa uga digay ciyaartoydiisa ka hor kulanka Morecambe inay la joogaan ama ka soo horjeedaan.
Isagoo la hadlayey warbaahinta ayuu yiri: “Ciyaaryahanadda aan ciyaareyn ma faraxsana. Ujeeddada ma ahan aniga inaan shaqsiyan la tartamo, laakiin waa in qof walba uu si wanaagsan u tababarto, inuu taageero ciyaartoydiisa iyo inuu yeesho dabeecad wanaagsan maalin kasta.”
Waxa uu uga digay qaar ka mid ah ciyaartoyda: “Haddii ay jiraan ciyaartoy aan sameynin, go’aan ayaa la qaadan doonaa. Haddii ay fursad jirto, waa inay ka baxaan sida ugu macquulsan, danta kooxda iyo aniga, waa dhici kartaa.”
Chelsea ayaa la filayaa inay ka tagto Marcos Alonso, Kepa Arrizabalga iyo Antonio Rudiguer bisha Janaayo.
Kahor shilka Morecambe, Frank Lampard wuxuu ugu yeeray dhalinyarada Henry Lawrence, Lewis Bate, Jude Soonsup-Bell iyo Tino Livramento kuwaas oo lafilayo inay xaadir noqdaan.
Andreas Christensen, Reece James iyo N’Golo Kante ayaa iyagana dhaawacyo ku maqan.
African independence: “The media has been one
CMA and the platform signal an settlement on